4 Askari Maraykan ah oo lagu dilay wadanka Afqaanistaan. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
4 Askari Maraykan ah oo lagu dilay wadanka Afqaanistaan.
On Aug 24, 2019 320 0
Wadanka muslimka ah ee Afqaanistaan waxaa ka soconaya howlgalka Al-fatxi, ee gugii ay ku dhawaaqday Imaarada islaamiga, waxaana todobaadkan dhacay weeraro kala duwan oo khasaare lagu gaarsiiyay ciidamada xukuumadda Kaabul iyo kuwa Marayanka.
Mid kamid ah weeraradaha khasaaraha adag lagu gaarsiiyay ciidamada Maraykanka waxa uu ka dhacay gobolka Faryaab, halkaas oo uu ka dhacay weerar adag oo hubka noocyadiisa kala duwan la isku adeegsaday.
Weerarka wuxuu yimid, kadib markii ciidamo huwan ah oo isuga jira Maraykan iyo malleeshiyaad Afqaaniyiin ah ay duulaan habeen guureyn ah ay kusoo qaadeen deegaanka Qurra Guwiili ee hoostaga degmada Albaar ee gobolka Faryaab.
Waxaa ciidankaas duulaanka soo qaaday weerar culus kala hortagay Mujaahidiinta Imaarada islaamiga ee Afqaanistaan, iyadoo goobta uu ka dhacay dagaal culus oo in muda ha soconayay.
Ciidankii huwanta ee duulaanka soo qaaday ayaa iyagoo jabay, kuna guuleysan ahdaaftii ay usoo duulaan tageen waxay ka carareen goobta, waxaana intaa u dheeraa in la gaarsiiyay khasaare adag oo dhimasho iyo dhaawacba leh.
Sida lagu sheegay, war kasoo baxay Imaarada islaamiga ee Afqaanistaan, waxaa weerarkaas oo dhacay maalintii shalay lagu dilay ugu yaraan 4 askari oo Ameericaan ah, iyo lix kale oo katirsan kumaandooska xukuumadda Kaabul.
Waxaa intaas dheer in weerarka lagu gubay gaari nooca gaashaman ah oo ay wateen ciidamada Marayknaka, halka sidoo kale lagu dilay labo eey oo watay garaadooyin sar sare oo muujinaya iney macallimiin ahaayeen.
Dhanka kale, ciidamada Mujaahidiinta Imaarada islaamiga waxay duulaan qorsheysan ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala gobolka Balakh ee dalka Afqaanistaan, kaasoo ka dhashey khasaare kala duwan.
Saldhiga la weeraray waxa uu ku yaalaa deegaan lagu magacaabo Khaan abaad oo hoostaga degmada Tash-haarboolik, waxaana inta la xaqiijiyay dhimasho iyo dhaawac ku noqday 13 askari.
Ciidanka xukuumadda Kaabul ayaa lagu kediyay weerarka, taasna waxay dhalisay in laga furto hub iyo saanad milliteri oo aad u badan, oo ay kamid yihiin rasaasta dhashkiikaha iyo baalatooyinka RBG.
Weerarkan oo dhacay habeenkii ay khamiista soo galeysay ayaa horsoodey in ciidamada xukuumadda Kaabul ay markale ka firxadaan saldhiga, kadib markii ay ogaaden in xalay ay weerar kusoo yihiin ciidamada Imaarada.
Waxaa jira weerar kale oo qarax loo adeegsaday, kaas oo ay ku go’een ciidamo katirsan kuwa xukuumadda Kaabul.
Gaari miineysan ayay Mujaahidiintu ku guuleysteen iney ku baakimaan meel u dhow goob lagu iibiyo shidaalka oo ku taalla degmada Manduuziyo ee gobolkha Khoost.
Gaariga ayaa qarxay xilli ay wadda marayeen kolonyo katirsan ciidamada xukuumadda Kaabul, waxana durba qaraxa ku gubtay labo gaari oo gaashaman, iyadoona ay ku dhex dhinteen ciidankii saarnaa.
Afhayeenka Imaarada islaamiga Dabiixullaahil Mujaahid ayaa war uu soo saaray wuxuu ku sheegay in weerarkaas ay ku dileen 14 askari, islamarkaana uu aargud u ahaa dadka muslimiinta ah ee maalmihii lasoo dhaafay ku waxyeeloobay weerarada ay fulinayaan Shisheeyaha iyo kuwa xukuumadda Kaabul.
Sidan ayuu wadanka Afqaanistaan kaga socdaa howlgalka jihaadiga ee Al-fatxi, waxaana Imaarada islaamiga ay sheegtay iney rajeyneyso in sanadkan uu noqdo kii ugu dambeeyay ee ay Shisheeyuhu isaga carari lahaayeen dalka muslimka ah ee Afqaanistaan.
Reer Afqaanistaan ayaa si adag oo muuqata isku garab taagay Imaarada islaamiga, waxaana iyagoo is kaashanaya, Allaahana ku tiirsan ay awoodeen in Shisheeyaha ugu horeeyo Maraykanka ku qasbaan inuu ku baryootamo in loo ogolaado inuu isaga baxo wadankan.
Kudhawad labatan sano kadib, waxaa reer Afqaanistaan markan carfinayaan saxan saxada guusha iyo nasriga, iyagoo u hilow qaba in Kaabul ay markale noqoto xarunta Imaarada islaamiga ee Afqaanistaan, ballac iyo dhirir wadankana uu ka hana qaado maamul islaami ah.